Qof kasta oo jecel telefoonka ah in si fiican u shaqaynayaan iyo dadka isticmaala iPhone in sida caadiga ah waxaa ka mid ah xawaaraha. Phone A degdeg ah waa fududahay in la isticmaalo iyo farxad ah in ay la tacaalaan taasina waa sababta si joogto ah isku day dadka intooda badan si loo dedejiyo qaab ay telefoonka ee. Isku day ay doonayso in ay caawiyaan ilaa aad dardar aad iPhone, waxaan doonayaa in aan eegno siyaabo dhowr ah inay sidaa sameeyaan, waayo, dhamaan noocyada iPhone. Aan ku bilaabaan iPhone 4.
Qeybta 1: Talooyin inay dadajiso aad iPhone 4 / 4s
Qeybta 2: Talooyin inay dadajiso aad iPhone 5 / 5S
Qeybta 3: Talooyin in ay dardar aad iPhone 6/6 Plus
Qeybta 4: 1 click inay dadajiso aad iPhone 4 / 4s / 5 / 5S / 6/6 Plus
Qeybta 5: barnaamijyadooda Great inay dadajiso aad iPhone 4 / 4s / 5 / 5S / 6/6 Plus
Ayaa talooyinka soo socda waa in ay caawiyaan ilaa aad dardar aad iPhone 4 / 4s;
Haddii aadan hore u leedahay, cusboonaynta in macruufka 9.0. Macruufka The 9.0 badan oo siyaada ah in hagaajin doono qaab aad iPhone waxay keentaa.
Disable app asalka wadajir u raaxayn tan iyo markii ay ku hayaa hababka loo baahnayn socda in faragalin ku samayn kara adiga iPhone ayaa qaab ciyaareed.
Iska yaree daahfurnaanta iyo mooshin saamaynta
Haddii aad keyboard waxaa ka danbayso, aad dedejin kartaa by resetting qaamuusyo keyboard ee app goobaha.
Delete oo dhan barnaamijyadooda iyo files warbaahinta in aan la isticmaalayn. Mararka qaarkood la'aanta ah ee meel ahaan sabab weyn arrimaha qaab karo.
Tilmaamahan ayaa kaa caawinaya in aad adigu dardar iPhone 5 / 5S.
Iska yaree dhaqaaq si aad u hesho uqaadineed xawaaraha qaar ka mid ah. Waxaad ku samayn kartaa in app goobaha.
Waxaad sidoo kale u baahan yihiin in ay soo jeedin ee daahfurnaanta iyo waxaad arki doontaa isbedello yar ee iPhone ayaa qaab ciyaareed.
Hubi in aad leedahay kaydinta ku filan sababtoo ah la'aanta kaydinta waxay keeni karaan barnaamijyadooda qaar ka mid ah inuu shil oo keeni qaab saboolka ah.
Dib u celi goobaha oo dhan. Resetting aad iPhone 5 hagaajin karaan arimo keeni qaab xumo aad iPhone.
Delete barnaamijyadooda iyo files warbaahinta in aadan la isticmaalayo.
Halkan sida aad u hagaajiso iPhone 6 ayaa qaab ciyaareed.
Uninstall codsiyada aan loo baahnayn oo la isticmaalin aad iPhone 6
Isticmaal arjiga sida PhoneClean ama SafeEraser in meesha laga saaro dhammaan faylasha junk on iPhone 6
Waxaad kaloo isticmaali kartaa SafeEraser iyo PhoneClean in ay ka saarto faylasha ku maqan ka iPhone
Xir dhammaan barnaamijyadooda isticmaalka ka dib markii si looga fogaado barnaamijyadooda socda ee asalka ah in xawaaraha aad iPhone hakin kartaa.
Cancel saamayn daahfurnaanta
Waxaa jirta waddo in aad hagaajin karaa iPhone ee xawaaraha ee 1-click. Mid ka mid ah codsiga in u san yahay, waayo, taasu waa SafeEraser Wondershare . SafeEraser kuu ogolaanaya in aad dadajiso qalab iyadoo ka dhigeysa in ay aad u fududahay in uu nadiifiyo habka. Inta jeer iPhone a liidata hayo waa sababta ugu weyn ee ka yar qaab xiddig. Waxaad isticmaali kartaa SafeEraser in ay nadiifiso dhammaan xogta gaarka ah iyo Free ilaa meel lagu kaydiyo qaar ka mid ah. Sida aan aragnay in talooyinka kor ku xusan, waxaad si fudud u hagaajin karaa iPhone ee waxqabadka intii qaar ka mid ah la xorayn, ilaa.
Aan aragno sida aad dedejin kartaa adiga oo isticmaalaya iPhone Wondershare SafeEraser. Maskaxda ku hay in mid ka mid ah siyaabaha loo tayeyn karo waxqabdka waa inaan tirtiro qaar ka mid ah files aan la rabin. Sidaa darteed, waxaan doonayaa in aan u isticmaali SafeEraser si joogto ah tirto faylasha aad tirtiray.
Talaabada 1: maleeyo in aad soo bixi oo lagu rakibay SafeEraser on your computer, ordo codsiga ka dibna xiriiriyaan iPhone isticmaalaya fiilooyinka USB. Codsiga waxaa lagu ogaan doonaa oo la aqoonsado aad telefoon sida hoos ku soo bandhigay.
Talaabada 2: waxay dhanka bidix ku doortaan masixi tirtiray Files. Codsiga bilaabi doonaan si ay u falanqeeyaan iyo iskaan xogta oo dhan aad iPhone.
Codsiga bilaabi doonaan si ay u falanqeeyaan iyo iskaan xogta oo dhan aad iPhone.
Tallaabada 3: Marka dhammaan faylasha ayaa la marsiiyey, iyagu lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala dhashay. Guji "masixi Hadda"
Waxaad dooran kartaa faylasha aad rabto in aad tirtirto adigoo sanduuqyada hore ee files ah.
Talaabada 4: ka dibna waxaa loo keenay in doonaa inaad xaqiijiso tirtirka by khaanada erayga "tirtirto" sanduuqa bixiyo.
Talaabada 5: daaqad cusub wuxuu muujin doonaa in geeddi-socodka ayaa guul u soo dhammaystay. Waxaad u baahan tahay si loo hubiyo in taleefanku xiran yahay si aad u computer oo dhan nidaamka oo dhan.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in faylasha ee aad ka qabto Lugood sidoo kale laga tirtirayaa iyo unrecoverable.
Masixi tirtiray Data iyo dardar iPhone Video Tutorial
Ee ah kuwa u isticmaali macruufka 8/9 ma aha wax aan caadi ahayn in ay la kulmaan arrimaha waxqabadka. HideMe7 ayaa lagu xusay sida isagoo caawinaad weyn leh in. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku dhuumato xubno UI ee macruufka 8/9 aan baahida loo qabo in ay leeyihiin ton ah uga faaidaysan kale oo ku lug. App waxa uu u suurtogelin doonaa si ay awood iyo gab dhinacyo gaar ah oo aad telefoonka sida xarunta, camera, icon jitter, Newsstand, bogga dhibco iyo kuwa kale.
URL Download: http://cydia.saurik.com/package/com.cpdigitaldarkroom.hideme7/
Tweak Tani dedejin doonaa animations aad. Waxa kale oo kuu ogolaanaya inaad si ay ula qabsadaan xawaaraha macruufka aad 8/9 animations in aad ka jeelahay. The animations ee macruufka inta badan waa mid gaabis ah, laakiin tweak haddii wax kale ma bixisaa dhalanteed ah doonaan in animations waxaa socda si ka dhaqso badan ay dhab ahaantii. Tani waxay ku siin doontaa jawi ku fiican in sida ugu dhakhsaha badan ee aad u baahan tahay caqabad ku ah animations gaabis ah oo aan shaqayn.
URL Download: http://cydia.saurik.com/package/com.marcosinghof.noslowanimations/
URL Download, http://moreinfo.thebigboss.org/moreinfo/depiction.php?file=nitrousDp
7 Waxyaabaha tahay in aad sameyso ka hor inta Iibinta Your iPhone
> Resource > iPhone > Sida loo dardar Your iPhone 4 / 4s / 5 / 5S / 6 / 6Plus